File manager; inona izany, fiasa ary safidy hafa - VidaBytes | LifeBytes
File manager; inona izany, fiasa ary safidy hafa
Iris Gamen | 01/06/2022 22:03 | fampiharana
Ny tsirairay amin'ireo rafitra miasa izay misy amin'izao fotoana izao, miasa amin'ny alalan'ny rafitra antontan-taratasy efa voafaritra mialoha izay hitantana ny isan-karazany ao amin'ny fitahirizana. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra ananan'ny Android dia ny manana fahafaha-manao bebe kokoa rehefa mijery ny lahatahiry fitahirizana. Tsy maintsy mampifandray ny findainao amin'ny tariby USB fotsiny ianao ary amin'ny PC. Amin'izany fomba izany dia afaka mandamina sy mamindra ny rakitra ilainao ianao.
Ao amin'ny lahatsoratra misy anao izao, Hiatrika ny lohahevitra isika hoe inona ny mpitantana ny rakitra ary iza no tsara indrindra. Hifantoka indrindra amin'ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fitaovana Android isika. Amin'ny ankamaroan'ny fitaovana finday na takelaka misy antsika, ny mpitantana ny rakitra dia matetika tafiditra ho fenitra, ny ratsy amin'izany dia ny ankamaroan'izy ireo dia tena fototra ary ilaina ny tsara kokoa.
Mba hahazoana ny fampisehoana tsara indrindra avy amin'ireo rafitra fitantanana rakitra ireo, ireo mpampiasa izay manana azy ireo dia ho mahazo mitahiry, manova, mamafa na mandika ny rakitra rehetra irina, ary koa ny fahafahana miditra amin'izy ireo tsy misy olana.
1 Inona no atao hoe mpitantana rakitra?
2 Inona no azon'ny mpitantana rakitra mitambatra?
3 Ny tsy fahampian'ny mpitantana rakitra mahazatra
4 Mpitantana rakitra tsara indrindra
4.5 Mpitarika manontolo
Inona no atao hoe mpitantana rakitra?
Ny mpitantana rakitra ho an'ny Android sy ny karazana fitaovana finday hafa dia mitovy miasa, mandrafitra ireo rakitra samihafa ary mamela anao hitantana ireo rakitra amin'ny fomba tena tsotra izay ananantsika ao amin'ny fitahirizanay.
Ao amin'ny solosaina dia efa misy io karazana mpitantana io, saingy tsy mitranga izany amin'ny fitaovana finday, tablette, sns. Ny mpitantana rakitra dia tsy tonga amin'ny alàlan'ny default.
Raha sendra, amin'ny fitaovanao dia tonga a Navoaka ny rafitra fichier, hanana fahafahana hanova izany haingana ianao ary izany dia amin'ny alàlan'ny fampidinana sy fametrahana fampiharana ho an'ity tanjona ity.
Inona no azon'ny mpitantana rakitra mitambatra?
Ny fananana mpitantana fisie miafina amin'ny fitaovana Android anao ao anatin'ny app Settings dia manondro fa ny orinasa dia te hanakana ireo mpampiasa ireo tsy hifandray amin'ny rafi-drakitra. Ny iray amin'ireo antony lehibe nahatonga ity fepetra ity dia ny fiarovana, satria Ny fiovana amin'ny firafitry ny rakitra voatahiry dia mety hampiato ny fiasa sasany.
Raha te-hiditra amin'ny fitaovanao ianao, dia tsy maintsy miditra amin'ny safidinao ianao, tadiavo ary safidio ny "Memory sy USB", avy eo miditra amin'ny "Memory anatiny" ary tsindrio ny "Explore". Rehefa manana ianao Sokafy ny explorer, ho azonao jerena ny lahatahiry rehetra voatahiry ao anaty fitadidiana anatiny ny fitaovanao.
Azonao atao ny manova ny fijerin'ny grid, ny fanasokajiana amin'ny anarana, ny daty na ny habeny ary afaka manao fikarohana mihitsy aza ianao rehefa manomboka io asa io ao amin'ny mpitantana. Mba hidirana amin'ny votoatin'ny lahatahiry dia tsindrio fotsiny ny iray amin'izy ireo.
Araka ny efa nolazaiko tao amin'ny fizarana teo aloha, noho ny fiasa fanovana samihafa ananan'ny mpitantana ny rakitra, dia afaka misafidy rakitra ianao, mamafa azy ireo, mandika azy ireo amin'ny toerana rehetra na mizara azy ireo amin'ny fampiharana hafa.
Ny tsy fahampian'ny mpitantana rakitra mahazatra
Amin'ity lisitra manaraka ity dia hahita andian-dahatsoratra ianao teboka ratsy izay zarain'ny mpitantana rakitra maro ary ilaina ny manatsara azy ireo mba hisian'ny fandaminana tsara kokoa sy ny fironan'ny mpampiasa.
Mpitantana rakitra mahazatra tsy manana asa tapaka, afaka mamindra rakitra avy amin'ny lahatahiry iray mankany amin'ny iray hafa, ny hany asa azo atao dia ny mandika. Rehefa manao ny asan'ny kopia, ny ataontsika dia ny mandika rakitra iray amin'ny fananana azy indroa, indray mandeha ao amin'ny lahatahiry voalohany, izay tsy maintsy fafana, ary iray hafa ao amin'ny lahatahiry voafantina.
Ny fahalemena faharoa hitantsika dia ny hoe tsy afaka manova anarana lahatahiry na rakitra ianao, ny anarana feno sy tany am-boalohany dia aseho foana, saingy tsy avelan'izy ireo hanova azy ireo ho fanavahana tsara kokoa.
Amin'ny tranga maro, tsy misy lahatahiry vaovao azo noforonina ho an'ny fandaminana tsara kokoa amin'ireo rakitra voatahiry dia ireo lahatahiry efa noforonina ihany no azonao ampiasaina.
Farany, mariho fa raha manana rafitra fitahirizana ireo rakitra nampidirina tao amin'ny rahona izy, na ao amin'ny Dropbox, Drive na hafa, dia ho fandrosoana lehibe ny fitantanana ireo rakitra ireo sy ny fitadidiana anatiny.
Mpitantana rakitra tsara indrindra
Mba hahafahana mampifanaraka ny rafi-drakitray, dia manoro hevitra izahay mba hahazoana safidy ho an'ny mpitantana mahazatra, izay, araka ny hitantsika tamin'ny fizarana teo aloha, dia afaka manolotra andiana tsy fahampiana. Amin'ity fizarana ity dia manolotra a fifantenana fohy momba ny sasany amin'ireo mpitantana rakitra tena ilaina.
Iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ireo mpampiasa, miaraka amin'iza afaka mandamina ny rakitra rehetra avy amin'ny fahatsiarovana anatiny sy ny karatra SD ary ny rahona. Maimaim-poana tanteraka izy io, ary mora ampiasaina ary misy karazana fiasa maro.
Google file manager, miaraka amin'ny interface tsotra. Dia mamela anao, tantano ny atiny voatahiry ao amin'ny fitaovanao, fa tsy ho fantatrao ny toerana tena misy ny rakitra. Azonao atao koa ny manafaka toerana amin'ny alàlan'ny famafana rakitra sy fampiharana, mitantana rakitra ary mizara azy ireo amin'ny fitaovana hafa.
Araka ny asehon'ny anarany, ity fampiharana ity Izy io dia manana ny fiasa rehetra azo ampiasaina hitantana azy amin'ny fomba tsara indrindra. Fitaovana maimaim-poana sy mahery vaika ahafahanao mitantana ny rakitrao nampidirina tao amin'ny rahona.
Tena mahazatra amin'ny finday Android, izay nanatsara ny fiasany sy ny famolavolana azy rehefa nandeha ny fotoana. Noho ireo fiasa izay noresahinay ireo, manana fahafahana hamorona lahatahiry na rakitra vaovao ianao. Ho fanampin'izany rehetra izany ary afaka mitantana azy ireo ianao dia afaka miditra amin'ireo rakitra voatahiry ao anaty rahona.
Tsy vitan'ny hoe mahita ny dikan-ny desktop, fa manana fampiharana ho an'ny mpampiasa Android ihany koa. Amin'ny resaka fitaovana hitantana rakitra dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Izy io dia manana fitantanana rakitra amin'ny varavarankely roa, safidy maro, safidy fanovana anarana, tsoratadidy, ary maro hafa.
Miaraka amin'ireo fitaovana fitantanana ireo, tsy vitan'ny hoe manatsara ny fandaminana ny rakitrao ianao, fa hanana fifehezana bebe kokoa amin'ny toerana misy ny tsirairay amin'izy ireo mba hahafahanao mamantatra azy ireo haingana kokoa amin'ny manaraka.
Lazainay aminao foana ny manaraka ary androany dia tsy ho latsaka izany, fa raha mieritreritra ianao fa mahafantatra mpitantana rakitra manokana izay efa nanandrana ary nanome vokatra tsara ho anao, aza misalasala mametraka izany ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » fampiharana » File manager; inona izany, fiasa ary safidy hafa
Bots mozika tsara indrindra ho an'ny Discord
esory ny sakana amin'ny facebook